मिसन साग : बक्सिङमा कम्तिमा चार वटा पदक आउँछ : प्रशिक्षक दीपक महर्जन | | Neplays.com
मिसन साग : बक्सिङमा कम्तिमा चार वटा पदक आउँछ : प्रशिक्षक दीपक महर्जन
काठमाडौं, २२ भदौ । दीपक महर्जन नेपाली बक्सिङको इतिहासमा सफल नाम हो । एसियाडमा कास्य पदक विजेता दीपक अहिले प्रशिक्षकको भूमिकामा छन् । नेपालमै हुन लागेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश बक्सिङमा पदक दिलाउने लक्ष्यसहित अहिले दैनिक खेलाडीहरुलाई अभ्यास गराउन लागि परेका छन् ।
प्रशिक्षणका दौरान केहीबेर फुर्सद निकालेर नेप्लेज डटकमको कार्यालयमा आएका दीपकले आसन्न सागमा नेपालले बक्सिङमा ४ वटा पदक आश गरेको बताए । उनले नेपाल भन्दा भारतीय खेलाडीहरु राम्रा भए पनि नेपालसँग भएका सिमित स्रोत र साधनकोबीचमा गरेको ट्रेनिङले पनि कडा टक्कर दिने बताए ।
सागको तयारी जेठको दोस्रो सातादेखि गरेको बताउँदै महर्जनले अहिलेपनि पुरापुर सामाग्री भने नआउँदा अप्ठेरो परेको गुनासो गरे । नेपालले सागकै लागि भनेर थाइल्याण्ड गएर २ महिना तालिम पनि गरेको छ । अहिले आर्मीले उपलव्ध गराएको ट्रेनिङ स्थल प्रयोग गरिरेको बताउँदै स्पाईरिङका लागि भने निजी क्लबहरुमा जानु पर्ने बाध्यता रहेको पनि सुनाए ।
प्रस्तुतछ दीपकसँग गरिएको यो कुराकानीको सम्पादित अंश र साथमा भिडियो पनि
सागमा बक्सिङले पदक ल्याउँछ?
सार्कमा भारतपछिको राम्रो टिम भनेको नेपाल नै हो । भारतीय खेलाडीहरु वल्र्ड च्याम्पियनसिपसम्म खेलेकाले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अलि गाह्रो छ ।
तै पनि पुरुषमा २ जना र महिलामा एक दुई जना खेलाडीले भारतीय खेलाडीसँग दह्रो प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । हामीले सागमा मेडल ल्याउनका लागि तयारी भने कडा गर्नुपर्छ । बक्सिङमा स्पाईरिङका लागि विदेशमा प्रशिक्षण अझै गर्न पाएको भए नतिजा राम्रो हुने थियो भन्नेमा छौं ।
यो भनेको सरकारी स्कूल र निजी स्कूलको नतिजा जस्तै हो । जसैगरी निजी स्कूलमा लगातार प्री टेस्टहरु भइरहेका हुन्छन् त्यसैगरी स्पाईरिङका लागि पनि प्रि टेस्ट भइरहन जरुरी छ । हामीले बक्सिङमा कम्तिमा चार वटा मेडल आश गरेका छौं । नेपाली खेलाडीहरु प्राविधिकरुपमा केही कमजोर भए पनि अरु कुरामा अब्बल छन् ।
म पनि खेलाडीबाटै प्रशिक्षक भएको हुँ । मलाई पनि कसरी खेल्ने भन्ने कुराहरु थाहा छ । नेपाली खेलाडीहरुमा एक्सपोजरको कमी भने महशुस हुन्छ ।
तपाई खेलाडीहुँदा र अहिलेको बक्सिङमा परिवर्तन छ?
पहिला क्याम्पमा प्रशिक्षकहरु ५०–५५ वर्ष पुगेका हुन्थे । हामीजस्तो स्ट्रोङ खेलाडीको प्याडिङ थाप्न गाह्रो हुन्थ्यो । उनीहरुसँग नयाँ टेक्निक पनि कम हुने गर्थ्यो । तर अहिले नयाँ नयाँ टेक्निकहरु पनि आएका छन् ।
खेलाडी र प्रशिक्षकमा के के भिन्नता हुन्छ ?
खेलाडी र प्रशिक्षकमा खासै भिन्नता मैले देखेन । प्रशिक्षकमा अलि बढी जिम्मेवारी भने हुने रहिछ । खेलाडीले कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । वेट घटाउनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक समस्याले सताइरहेको हुन्थ्यो । प्रशिक्षक भएपछि खेलाडीलाई कसरी अनुशासनमा राख्ने जिम्मेवार बनाएर ट्रेनिङ दिने भन्ने कुरामा ध्यान हुन्छ ।
पुलिसमाथि मच्छिन्द्रकाे संघर्षपुर्ण जित
त्रिकाेणात्मक सिरीजः मैदानकाे नयाँ स्वरूप, कडा सुरक्षा ब्यवस्था, प्रबिधिकाे प्रयाेग
पर्थबिरूद्ध सन्दिपकाे मध्यम प्रदर्शन, २९ रन दिएर एक विकेट लिए
तीन शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय आत्मरक्षा तालीम हुने
मन्जु र विनिता फाइनलमा